Otu nwa agbọghọ dị afọ iri abụọ aha ya bụ Helena sịrị: “Mama m gwara m ka m gbalịa ka mụ na ndị tọrọ m na-akpa nkata. Ọ sịrị na m ga-ahụ na ọtụtụ ihe na-amasị m na-amasịkwa ha. Ihe ahụ o kwuru bụ eziokwu, o meekwala ka m nwee ọtụtụ ndị enyi!”
Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na asatọ aha ya bụ Serena, sịrị: “Ana m ege ntị nke ọma mgbe ndị ọzọ na-ekwu okwu, anaghị m achọ ka naanị m na-ekwu ihe niile. M chọọ ikwu okwu, ana m agbalị ka m ghara ịna-eto onwe m ma ọ bụ ghara ikwu ihe ga-eme ka e lewe ndị ọzọ anya ọjọọ.”
Otu nwa okorobịa dị afọ iri abụọ na otu aha ya bụ Jared, sịrị: “Ọ bụrụ na mmadụ agwawa m ihe m na-amaghị, m na-ajụ ya ajụjụ ka ọ kọwakwuoro m ya. Ọ ga-eme ka mụ na ya na-akparịta ụka na-aga.”
Otu nwa agbọghọ dị afọ iri na isii aha ya bụ Leah, sịrị: “Abụ m onye ihere. Ọ bụ ihe mere m ji na-agbalịsi ike ka mụ na ndị mmadụ na-akparịta ụka. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka ya na ndị ọzọ bụrụ enyi, onye ahụ kwesịrị ịna-emete ndị ọzọ enyi. Ọ bụ ya mere m ji mụta ịna-ekwuru ndị mmadụ okwu.”